Ma rabtaa inaad ogaato sida duufaanku u sameysmo? | Saadaasha Shabakadda
Monica Sanchez | | Duufaannada, Dhacdooyinka saadaasha hawada
Duufaantii Catarina, 26-kii Maarso 2004
Mid ka mid ah dhacdooyinka saadaasha hawada ee inta badan soo jiita dareenka awoodda ay ku guuleysan karaan iyo, natiijada, dhaawaca ay u geysan karto, shaki la’aan waa halyeeyadayada maanta.
Ma rabtaa inaad ogaato waxa ay tahay duufaan sidee loo sameeyaa? Hoos ayaan kuugu sharixi doonaa.
Duufaan ayaa ah hawo weyn oo dabayl wadata oo duufaan wadata, kaas oo laga abuuri karo goob kasta oo ay jiraan culeysyo hooseeya, maadaama kuwani ay yihiin aagagga soo jiidanaaya hawada.
Shan nooc oo duufaanno ah ayaa la kala soocayaa (kulaylaha, kulaylka, subtropical, polar iyo mesocyclones), kuwaas oo aan ka muujin doonno duufaannada kulaylaha iyo cirifyada duufaannada ee noqnoqda kuwa ugu halista badan ee wararka.
-Duufaanta kuleylaha: wuxuu ku sameysmaa badda dhexdeeda oo heer kulkeedu sarreeyo, diirran yahay. Ka mid ah dhuuq dhammaan tamarta ay u baahan yihiin si loo horumariyo. Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa duufaanno ama duufaanno, iyo xitaa sida duufaanno kulaylaha.
Dabaylaha ay soo saaraan waxay gaari karaan xawaare ugu yaraan 120km saacaddii, oo ay weheliyaan roobab culus.
-Duufaantii Polar: Si ka duwan kuleylaha, duufaanta noocan ah waxay leedahay waqti ka gaaban. Waxay u horumariyaan si dhakhso leh, aad iyo aad u badan sidaas ay ku gaaraan awoodooda ugu sareysa hal maalin oo keliya.
Looma tixgeliyo inay yihiin kuwo dhibaato wata sida duufaannada, laakiin xoogga dabayshu sidoo kale way sarreeyaan.
Duufaan, mid ka mid ah cawaaqibka ka dhalan kara cyclogenesis qarxa
Waxyaabaha qarxa ee cyclogenesis
Markii laga hadlayo duufaannada waa lama huraan inaan wax ka qabanno arrinta walxaha qarxa ee cyclogenesis. Dhacdadan ayaa ah wax aan ka badnayn isku-darka duufaanta, soo saarista dabaylo aad u daran oo dabaylo iyo duufaanno ah oo sababi kara waxyeello culus oo maadiga ah
Si ay u dhacdo, heerkulka dusha sare ee badda iyo kan hawadu waa inuu ahaadaa mid aad u kala duwan, si ay u jirto hoos u dhac cadaadis oo muuqda iyo waqti aad u gaaban.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » Waa maxay duufaan sidee loo sameeyaa?
Tani way fududahay, ku sii soco sidan, waad ka adkaan kartaa oo ka dhib badnaan kartaa tan, fadlan, fadlan, waxaan ahay cunug jiir 'skywars'
Ku jawaab yeffry